काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतबाट ‘श्रीयन्त्र’ झिकिएको छ। धार्मिक र तान्त्रिक महत्व रहेको ‘श्रीयन्त्र’ लाई सोमबार निकालिएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५१०:५५
चर्चित नेता लालुलाई ३ बर्ष जेल सजाय यस्ताे छ खास कारण
सशस्त्र एसपीको यस्तो ‘पावर’ ! आफन्तको विवाहमा सशस्त्रका एसपीले लगे हतियार र गाडी !
काठमाडौं ७ बाट निर्वाचनमा उठ्ने पक्का भएपछि पहिलो-पटक के भने वामदेव गौतमले ?
गोली प्रहार गरेको आरोपमा २ पक्राउ